Desktop Mobile Overtakes ho an'ny mailaka misokatra | Martech Zone
Talata, Jona 19, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Tsy mino aho fa hafa noho ny ankamaroan'ny olona aho. Manamarina mailaka mandritra ny tontolo andro ao amin'ny iPhone aho ka rehefa manomboka miasa aho dia afaka mifantoka amin'ireo olana izay manan-danja indrindra. Ny fitaovana findaiko no fitaovana voalohany hampiasako sy handrindrana ireo hafatra voaraiko. Mazava ho azy, tsy maharary izany rehefa hohatsaraina amin'ny finday ireo mailaka ireo. Raha mila fanampiana fanampiny ianao hahazoana ny namana mailaka mailaka, aza hadino ny misintona ny fomba fanaovana namana amin'ny mailaka.
Ny mpamandrika dia mahazo mailaka manerana ny sehatra sy fitaovana maro. Azo inoana fa ny mailaka ataonao dia mamely ny boatin-kafatra Gmail azy, manazava ny findainy, ary azo ampitaina any amin'ny kaontiny asa. Fa fantatrao ve hoe aiza ny mpihaino anao manokatra ny mailaka farany anao?
izany infographic avy any Litmus manome porofo fa nivadika ihany ny onja ary nahatratra ny mpanjifan'ny mailaka birao ny finday!
Tags: mailakamailaka iphonelitmusmailaka findayfamolavolana mailaka findaystatistika mailaka finday
Offerpop: fitantanana fampielezan-kevitra sosialy farany